कथा – मसली भाउजु | साहित्य संगालो २०१३
कथा – मसली भाउजु
असार महिनाको पन्ध्र गते हाम्रो नेपाली समाजमा दही-चिउरा खाने परम्परा छ । आˆनो घरमा दुहुना गाई/भैसी नहुनेले पनि किनेर, खोजेर, मागेर ल्याएर पनि खाने चाड मान्ने चलन छ । सबैका घरमा धेरथोर दही-चिउरा तयार हुन्छ । यस वर्षको मनसुन ढिलो प्रारम्भ भएको कारण पानी परेको छैन । सिचाइको अभावमा जमिन मुख बाएर बसेका छन् । अधिकांश आकाशे खेत बाझो पल्टेका छन् । थोरै कुलो लाग्ने खेतको पनि रोपाइ थालनी भएको छैन । राकसे बूढाको धेरैजसो खेत पानी पट्ने हुनाले खेतको काम भ्याइनभ्याइ छ । गाउमा राकसे बूढा आफैा पनि खेतमा दिन बिताउाछन् । हली, गोरु बिहानै खेतमा पुग्दछन् । आफू र जन-वन झण्डै बराबरी लगाउाछन् ।
सााझमा पानी छिट्याएजस्तो भएको थियो । बाहिर काममा जानेहरू अलि ढिलो घरमा भित्रिन आउने गर्थे । खेतको काम प्रशस्त हुने गथ्र्यो । दिन लामा, रात छोटा हुादा थकाई मार्दै काम गर्दा पनि कामको भाग बढी देखाउन सकिने । जोत्ने, आली काट्ने, बियाड उखेल्ने, रोप्ने आदि काम गर्नुपर्ने । खेतको कामको व्यस्तता छ भने बारीको कामको पनि व्यस्तता थपिन लाग्या छ । अघौटे मकै पूरै पाकेर भााच्ने समय भएको छ र पाकेको मकैलाई सुगाले ज्यादै खेदो गर्छ । केटाकेटी लगाएर टिन ठटाएर हाहा-स्यूास्यूा गरेर धपाउन बाध्य हुनपर्छ । अझ नजिक बाासझ्याङ्ग भएका स्थानमा त मकैको खेदो पाइलो गर्छ सुगाले । मकैको घोगैपिच्छे सुगा सलबलाउाछन् र ठुङ्छन् ।
राकसे बूढाको गाईले सााझ दूध दिएन, दुहुन बसेको नरमानलाई लात्तीले हानेर बलड्यान खेलाइदियो । नरमान तीन हात पर उछिट्टयिो । गोबरमा लटपटिन पुग्यो । नरमानले गाईको फााचो धुन मात्र के लागेको थियो, ढुङ्ग्राको पानी पोखिनुको साथै ढुङ्ग्रो विपरीत दिशामा घोप्टिन पुग्यो गाईको खुट्टाले । गोबरमा लटपटिएको शरीर लिएर नरमान जेठीमैयाालाई गाईले दूध नदिएको खबर सुनाउन पुग्यो । कोठीको चामल झिकेर नाङ्लोमा राखेर निफन्दै थिइन् जेठीमैयाा । के कुतल पर्‍यो । घाास पनि पुगेन कि भनेर चर्चा भएन, त्यतातिर कसैको ध्यान गएन ।
नाङ्लामा केलाउादै गरेको चामल भान्साकोठामा राखेर जेठीमैया सारी सुर्कदै आागनमा आइन् । ठूलो स्वरले “कुन रााडीले गाईलाई टुनामुना गरिदियो भनेर कराउन लागिन् । कुन रााडीका आाखा र छौडा लागे भन्दै आागनमा चक्कर काटिन् । बूढीका आाखा राता भए । चाडबाडका दिन अनेकथरिका रााडहरूलाई यहीा गाड्न मुन्ट्याउाछन् । ए नरमान जा धामी बोलाउन, पुछारघरे साहिला घरमा आइपुग्या होला, बोक्सी रााडीहरूको करामत हो । ब्याएको तीन महिना भएको छ ।” जेठीमैयााको आाखा गाईको थलामा घुम्न सकेन । गाईको थलामा घाास छ, छैन । चरणबाट आउादा गाईले पेट उकासो, उकासेन । दिउासो खोले पनि पायो पाएन आदिबारे जेठीमैयााको सोच पुगेन ।
दूध किन दिएन भन्नेतिर मात्र मन कुतकुत्तियो, आक्रोशित मात्र भइन् बूढी । बेला न कुबेला रााडीहरू घर-आागन-गुवाली चाहार्न आउाछन् । दशथरिका प्रश्न सोध्न तम्सिन्छन् । तरकारी, नून भुटुन चाहिन्छ बजिनीहरूलाई, रााडीहरूको केही खाएको न पाएको बोक्सी रााडी छिर्किनी गर्न आएकी थिई, उसैको नजर लागे क्यार । शोभ सालधुप र झुम्रो सल्काएर गाईको तारैतिर घुमाई दे, त्यही केही क्षणपछि नजर भगाएर दिन्छिन् कि जेठीमैयााको आक्रोश थामियो यति भन्दै ।
बुहारी शोभा सालधुप खोजेर, घुमाउनतिर लागी । सासूका वचन कानमा थापिरही, केही जवाफ गर्न सकिन । सासूका मुखबाट व्यक्त भएका असभ्य शब्दहरूसाग ऊ सहमत भने थिइन । शोभालाई बोक्सी विद्या भन्ने कुरीतिगत सोचाइमा त्यति विश्वास थिएन । विरोध गर्ने आाट पनि भएन ।
अलिकति घाास थपिदिन्छु, पेट उकासेपछि केही क्षणमा दिन्छ कि बाच्छो बााधेको छु । नरमानले नरम जेठीमैयाालाई जवाफ गर्‍यो । मकैको थाङ्ग्राको बलामा ल्याएर रित्तो ढुङ्ग्रो झुण्ड्यायो ।
केही क्षणपछि बूढीको बक्बक् पुनः प्रारम्भ भयो । जथाभावी कुरा छाद्न थालिन् । दिउासो त्यही लखवेश्या पापिनी सङ्गारे आइमाई उमेरमै पोइलाई अघि लगाएर, दुईवटी छोरी चेपेर जीवन घिसार्दै छनि, नक्कली विधवा भएर पनि कोरीबाटी गरेर हिाड्छे । चाउरी परेको गालाको मुजा थाहा छैन । छोरी पधलेर पोइ खोजेर हिाड्न आाट्याछन् । आमालाई बैासले छाडेको छैन । केही क्षणअघि मुन्टेकी थिई यहा । बजिनी निकै समयसम्म थच्चिई । बारह सत्ताइस कुरा बखानी । त्यसको देवर विदेश गएर पैसा कुम्ल्याएर पठाएको समाचारसमेत फलाक्थी । त्यस बजिनीको देवरले पठाएको सम्पत्तिसाग हाम्रो के नातो र स्वार्थ । चोथालेको देवर थियो, पोइ बनाएको हो कि, पैसा पठाइदिएकाले सुखका दिन आए भन्थी ।
नरमान बूढीका कुरा कान थाप्दै गुवालीको बलेसीमा घुर बाल्दै थियो । मच्छडले गाई-गोरु ज्यादै छट्पटाएका थिए । वषर्ा यस्तै हो । गोवरग्यास र बिजुलीको कारण र पानी नजिकै जमेपछि भुसुना र मच्छड लाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ नि, गर्मी पनि त अति छ ।
पर दोबाटोको छेउमा सञ्जयले आमाको चर्को स्वर सुनेको थियो । केही नबोली सरासर आागनमा आएर उभियो । आमालाई भान्साकोठामा बसेर जथाभावी फलाक्दै गरेको देख्यो, सुन्यो । आमा यसरी किन उम्लिरहेकी थिइन् । ज्वालामुखी पड्केजस्तै । आखिर यो फलाको र ईष्र्या, डाह कोमाथि खन्याएको हो बुझ्न चाहृयो ।
आमाको आवेग र आक्रोश कम गर्न, शालिन तरिकाले नरम स्वरमा सञ्जयले सोध्यो ? के भयो आमा, किन यसरी ठूलो स्वरले जथाभावी गाली गर्दै हुनुहुन्छ । घरमा त नरमान र बुहारी मात्र छन् । बुइनी पनि देखिएकी छैन । साना नानीहरूलाई तपाईंका यी शब्द वाणसाग कुनै साइनो र सम्बन्ध हुादैन । भयो के ?
“बाबु खेतबाट दिनभरिको कामले लखतरान भएर खेतालाका साथ आउादै हुनुहुन्छ ।”
दिनभरि बजारमा घुमेर आएको छस् ता, पाहुनाजस्तो भएर टुपलुकिएझैा । घरमा कस्तो घटना घट्छ, कस्ता मान्छेले के टुनामुना गरेर जान्छन् । घरमा परेको बिघ्नबाधामा न उमेर पुगेकी छोरीलाई चासो छ, न बुहारीलाई, न जागिर खाएको छोरालाई । हण्डर खेप्नुपर्ने त हामी दुई जोई-पोइले मात्र त हो नि । उमेरले बूढो भनेर पार पाइएको छैन । हण्डर र मुक्तमान कति भोग्नु, जीवनभरि दुःख गर्न लेखिया रहेछ । दिनभरि घरमा बसेर अनेकौा लण्ठा भोग्नु न हो ।
“कमसेकम तपाईंले बुझेको, तपाईंलाई मर्का परेको झ्याउला पन्साउन परेको दिकदारी चोट हाम्रा सामु राम्रो तरिकाले बुझाएर भने पो न्याय, अन्याय र मर्का कस्तो पथ्र्यो बुझ्न पाए पो बोल्नु त”, सञ्जयले आमालाई कडा शब्द भावभङ्गी मिलाएर आागनको कुर्सीमा बस्तै व्यक्त गर्‍यो ।
पार्वती र शोभा पनि आागनमा आएर त्यही समयमा ठिङ्ग उभिए । उनीहरूको अनुहार गम्भीर चिन्तायुक्त देखिन्थ्यो । एक प्रकार स्थिति बेग्लै हुन गयो । वास्तविक कुरा खोतल्नु सञ्जयको कर्तव्य नै थियो । सबै जना आागन र दलानमा भेला भए । जेठीमैयाले उठाएको रडाको बारे पार्वती र शोभा अनभिज्ञ नै थिए । मेलोमेसो नै थिएन । झोल घोप्ट्याएजस्तो अनुहार पारेर नरमानले भन्यो गाईले दूध दिएन ।
गाई सबेरै बााधेको, खोलेपानी पनि दिन भ्याएको थिएन । खेतको चटारोले सबको ध्यान खेततिर केन्दि्रत भएको छ । शोभाले घोसेमुन्टो लगाएर डराई डराई भनी । सञ्जयले बोल्न नपाउादै बूढी सबका सामु कुर्लिन् । मसली आएकी थिई, थोरै बात चुटेर गई । रााडीका मुखका दाात झरेका छन् । अनुहार हेर्दै बोक्सीजस्ती लाग्छे । पोतो बसेको अनुहार छ । लेघ्रो तानेर चिप्लाई घसेर बोलेर गाड्छन् । काकीको त गाई दूध दिादै छ, थाकेको छैन । मेरो भैासी त थाक्यो, साटोपाटोको चााजोपााजो मिलाउन भनेको भनेर लेघ्रो तान्थी । निकै समय थचारिई । काम न काजकी बजिनीलाई पिाधमा फोका उठुञ्जेल बसे पनि के बित्ने लवस्तरीको । के तन्तर मन्तर गरेर गई, गाईले टाङमुनि बस्न दिएन । नरमानलाई नै पल्टाई दियो । तिमीहरूलाई भाग बस्न पाए भई हाल्ने, पुर्‍याउनु टार्नुसाग कुनै सरोकार छैन । छोराबुहारी र छोरीको सामु भुत्भुताएपछि बूढीको रिस आधा घट्यो । एकपल्ट आाखा फर्काएर पूर्वी आकाश हेरेर मौन भइन् । शोभा केही नबोली भान्सामा प्रवेश गरिन् । पेटभरि घाास खान दिउा दूध, देला नि । गाईवस्तु यदाकदा यस्तो भइहाल्छ नि । आमाको बानी पनि ठीक छैन क्या । बढी अर्कालाई आरोप र दोष लगाउनुहुन्छ पार्वतीले आˆनो मनको कुरा गरी ।
आमाले टिप्पा खाइन् । तालाई लवस्तरी, नक्कली । लाद्रो भर्न पाए भइहाल्छ । पोइको घर खान सकिनस् । बाबु र दाजुको कमाईमा भाउजूलाई कजाएर खान पल्केकी छस् र गोडा पसारेर हसुर्छेस् । टार्न पुर्‍याउने मान्छे दोषी हुन्छ । टार्नु पुर्‍याउनु नपर्नेलाई सधैा हाइसञ्चो ।
निकै गम खाएर सञ्जयले आमाको रिसलाई कम गर्ने प्रयत्न गर्‍यो । आमालाई सम्झाउने किसिमले भन्यो तपाईंले जीवनको लामो यात्रा पार लाउनुभएको छ । सत्तरीको नजिक पुग्नु भो । केश फुलेर हिमालजस्तै सेता भएका छन् । तपाईंको रिस कम भएको छैन । दायााबायाा बुझ्न हुन्न । कसैसाग रिस उठ्नेबित्तिकै बोक्सीको आरोपमा मान्छेलाई मुछ्नु हुन्न । अपराध हुन्छ । सक्नेले मुद्दा लगाइदिन सक्छन् । दाात झर्नेबित्तिकै बोक्सी हुादैन । विधवा अथवा एकल महिला हुनु अपराध होइन, बाध्यता हो । तपाईंका छोरा छन् । उनका छोरी मात्र छन् । तपाईंसाग सम्पत्ति छ, उनी गरिब छिन् । आफूले सम्मान पाउन अर्काको पनि सम्मान गर्न जान्नुपर्छ ।
सञ्जयले यति लामो कुरा गर्दा जेठीमैयाा कान थापेर सुनिरहिन् । एक शब्द पनि फर्काउन सकिनन् । आफूले गल्ती गरेको महसुस गरेर जवाफ नफर्काएको हुनसक्छ । बूढीको अनुहार मलिन भएको र पश्चाताप महसुस गरेको जस्तो लाग्दथ्यो ।
केही क्षणको मौनतापछि सञ्जयले आˆना कुरा फेरि भन्न थाल्यो बिचरी मसली भाउजूले भैासीको दूध बेचेर छोरी पढाएकी छन् । देवरले विदेशबाट पैसा पठाइदिन थाल्या छ । सुखका दिन आए भनेर खुसी छन् । नागरिकता बनाइदिन अधिकार पाए महिलाले छोराछोरीको नागरिकता बनाउन अब देवर-जेठाजुको शरण पर्न परेन गाईले दूध नदिनुको कारण त पेटभरि खोले-घाास खान नपाएर पो त हो त । बुढेसकालमा सम्मान खोज्नेकी अपमान । तपाईंले व्यक्त गरेका शब्दहरू र शब्दवाण मसली भाउजूले थाहा पाइन् भने के हुन्छ ? जीवनको नियति यस्तै कठोर हुन्छ कि नरम ?
सञ्जयले सम्झाएपछि जेठीमैयाको रिस केही कम त भयो तर भुत्भुताउन भने केहीबेरसम्म थामिएकी थिइनन् । के युग आयोआयो हगेका लिाडको शासन सहनुपर्ने, लाद्रो भर्न पाएपछि जे बोल्दा पनि हुने, अरूले पचाई दिनुपर्ने त्यसो त अब संसारमा भगवान् पनि छैनन्, धामी, झााक्री, ज्योतिषी सब नष्ट भए, बोक्सी नभए धामी किन चाहियो । गोठको धूप किन गर्ने, कुलाइन पूजा किन गर्ने ? आदि बकवासपछि बूढी भित्र प्रवेश गरिन् ।
पार्वती र शोभा केही बोलेनन् । नरमान गाईलाई खोले दिन थाल्यो । सञ्जयले घरमा भएका सबैले सुन्ने गरी पुनः आˆनो भनाइ राख्ने प्रयत्न गर्‍यो ।
विगतको युग नै त्यस्तै थियो, मान्छेले आˆनो शक्ति चिन्न-बुझ्न सकेका थिएनन्, अाध्यारो युगमा निरीह भएर बााचेका थिए, एक्लो जीवन बिताएका थिए । भौतिक प्रगति भएको थिएन । अाध्यारो युगले दिएको गलत संस्कृति र अन्धविश्वास हो । बोक्सीका कुरा अब गर्दै हिाड्नु अपराध हुन्छ । अब हामी नयाा युगमा प्रवेश गरेका छौा । भोलि उमेर, सम्पत्ति र छोराको धाक नदेखाई मसली भाउजूसाग यी आज व्यक्त गरेका बकवास र आरोप अब आइन्दा कसैलाई लगाउने छैन भनेर माफी माग्नुपर्छ भन्दै सञ्जयले आमालाई सम्झायो ।
सञ्जयका घरमा भएका कुरा थाहा पाएर हो या नपाई हो, मसली भाउजू बिहान सबेरै त्यस घरमा आइन् । राकसे बूढाका घरपरिवार सब चुपचाप भए । मसलीले जेठीमैयाालाई नमस्कार गर्दै आागनको कुर्सी तानेर बसिन् । केही क्षण सब मौन रहे । मसलीसाग बोल्ने आाट गरेनन् । केही क्षणको मौनतापछि मसली आफैाले भनिन्- “काकी तपाईंलाई देख्दा आमा देखेजस्तै लाग्दथ्यो र आदर गर्दथेा । कसैको नम्रता, श्रद्धा र आदर्शलाई कमजोरी ठानेर दशथरिका आरोप लगाउन कति निन्दनीय छ” भन्दै बसेको ठाउाबाट उठेर बाटो लागिन् । कसैले पनि उनलाई बस भन्न सकेनन् र विषय र प्रयोजन पनि कोट्याउन चाहेनन् ।
This entry was posted in Nepali Stories and tagged कथा, मसली भाउजु, Nepali Stories by भण्डारी2013. Bookmark the permalink.